Manozona an'i Hama i Noa, nataon'i Ivan Ksenofontov, taonjato faha-19
I Hama na Kama dia olona resahina ao aminny Baiboly, izay voalaza fa iray amin'ireo zananaka lahy telon'i Noa (na Noe). Rahalahin'i Sema sy i Jafeta izy. Niaraka tamin'i Noa rainy mbamin'ireo rahalahiny sy ny vadiny ary ireo vadin-drahalahiny tao anaty sambofiara izy nandritra ny safodrano nandripaka ny zava-manana aina teto ambonin'ny tany.
Indray andro, taorian'ny safodrano, dia mamon-divay i Noa ka hitan'i Hama ny fitanjahany nefa tsy nanao afa-tsy ny nilaza izany tamin'ireo rahalahiny izy ka ireto no nampitafy an-drain'izy ireo. Rehefa nisava ny hamamoan'i Noa dia nanozona an'i Kanana zanak'i Hama ka nanambara fa ho andevon'i Sema sy i Jafeta izy.
Nanana zanaka lahy efatra i Hama, dia i Kosy, i Mizraima, i Kanana (na Kanaana) ary i Pota ka izy ireo no nitaranaka ny mponina any amin'ny tapany atsimon'ny tany araka ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 10.6 sy ny manaraka).
Ny taranak'i Kanana (Kananita) dia nonina tao amin'ny tanin'i Kanana, ny an'i Kosy tao Etiopia, ny an'i Mizraima tao Egipta ary ny an'i Pota tao Arabia.
Avy tamin'ny anaran'i Hama sy i Sema no nakan'ireo mpadinika tenim-pirenena sy ireo manam-pahaizana momba ny fomba isam-poko ny anaran'ilay fianakaviam-piteny atao hoe hamito-semitika (na afro-aziatika) sy ny anaran'ny mponina any avaratr'i Afrika sy any Azia Atsimo Andrefana atao hoe Hamito-semita.
↑ Genesisy 10.6: "Ary ny zanakalahin'i Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana." (Ny Baiboly - Baiboly protestanta)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hama&oldid=966847"
Voaova farany tamin'ny 5 Martsa 2019 amin'ny 08:54 ity pejy ity.